Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Nitifitra tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Atlanta
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Novambra 20, 2021
Miafina ny olona
Andro tena be atao amin'ny fisavana fiarovana TSA ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hartsfield-Jackson Atlanta amin'ity sabotsy ity alohan'ny herinandro fitsangatsanganana be atao indrindra any Etazonia - Thanksgiving. Efa voarakitra an-tsoratra ny isan'ny mpandeha mandeha amin'ny fialantsasatra. Notaterin'ny TSA omaly fa nijery mpandeha maherin'ny 2.2 tapitrisa.
Nirefodrefotra ny poa-basy ka niteraka korontana teo amin’ny toeram-pisavana lehibe. Nasehon'ny lahatsary tao amin'ny media sosialy ny olona nitsirara tamin'ny tany, ny akanjo sy ny entana manokana niparitaka tamin'ny tany. Nisy ny mpandeha nafindra toerana, ary ny sasany kosa nijanona teo amin’ny sisin-dalana niaraka tamin’ny kitapony.
Raha ny fantatra dia basy tsy nahy no nitifitra fa tsy nitifitra. Tsy nisy ny naratra.
Ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hartsfield-Jackson Atlanta dia nisioka. "Tsy misy atahorana ho an'ny mpandeha na ny mpiasa."
Ny Departemantan'ny polisy Atlanta dia miasa amin'ny famaritana ny toe-javatra manodidina ny zava-nitranga.
Aorian'izay, ny sidina miainga dia eo ambanin'ny vavahady ary misy fahatarana latsaky ny 15 minitra, raha toa ka misy fahatarana mitovy amin'izany ny sidina tonga, hoy ny Federal Aviation Administration.